Wasiirka cusub ee maaliyada Puntland oo kormeer ku sameeyay ciidamada Puntland ee ku sugan gobolka Sool - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandWasiirka cusub ee maaliyada Puntland oo kormeer ku sameeyay ciidamada Puntland ee ku sugan gobolka Sool
August 18, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
(Bidix) Wasiirka maaliyada Puntland Cabdullaahi Siciid Caarshe. (Midig) Taliyaha ciidamada Danab ee Puntland Kornayl Jimcaale Jaamac Takar. [Xigashada Sawirka: Puntlandi]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirka cusub ee maaliyada Puntland Cabdullaahi Siciid Caarshe ayaa maanta oo Jimce ah soo kormeeray saldhigyada ciidamada Puntland ee gobolka Sool iyo kastamka canshuuraha Tukaraq.
Wasiir Caarshe ayaa kulan la yeeshay saraakiisha ciidamada, masuuliyiinta Tukaraq iyo saraakiisha kastamka canshuuraha.
Caarshe ayaa balanqaaday in ay ciidamada siin doonaan xuquuqdooda sida mushahaarka.
“Shacabku waxa ay ku seexdaan waa ciidamada, waxaan balanqaadaynaa in aan siino mushahaarkooda iyo xaqa ay leeyihiin,” ayuu yiri wasiirka maaliyada.
Dhankooda, saraakiisha ciidamada ayaa wasiirka uga mahadceshay balanqaadkiisa iyo safarka uu ugu yimid.
Asbuucii hore, Puntland ayaa ciidamo geysay deegaano kuyaala gobolka Sool isku day ah sidii looga hortagi lahaa in maamulka Somaliland ay sanaadiikhda cod bixinta geyso deegaanka.
September 12, 2017 Wasaaradda Maaliyada Puntland oo sheegtay in dhawaan ay soo bixi doonaan go’aano ku saabsan adeega EVC
Madaxweynaha Puntland oo u safray Sucuudi Caraabiya si uu u soo guto waajibaadka xajka
RW hore ee Britain David Cameron oo shaqada ka tagay
Raysulwasaaraha Britain David Cameron ayaa xilka ka tagay maanta oo Arabaco ah kadib markii dalkiisa uu ka baxay Midowga Yurub, afti dad weyne oo dhawaan la qabtay. Cameron ayaa taageersanaa in dalkiisu uusan ka bixin [...]